အိမ်နီးချင်းတွေရဲ့ အင်တာနက်သုံးစွဲမှုကြောင့် မိမိသုံးစွဲနေတဲ့ အင်တာနက်လိုင်းကို မထိခိုက်နိုင်ပါဘူး။
လျှပ်စစ်မီးပြတ်တောက်သွားချိန်မှာလည်း အင်တာနက်လိုင်းကို သုံးစွဲနိုင်ပါတယ်။
သာမန်ဒေတာ သုံးစွဲမှုသာမက ဗီဒီယိုကြည့်၊ ဂိမ်းကစားခြင်းများကိုပါ သုံးစွဲသူများစွာ တပြိုင်နက်အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။
Telenor Broadband 5Mbps
တပ်ဆင်ခ:၁၅၀,၀၀၀ ကျပ် (လုံးချင်းအိမ်များအတွက်) တိုက်ခန်းများ တပ်ဆင်ခ မကောက်ခံပါ။
အသုံးပြုသူ ၃ဦး မှ ၄ဦးအထိ တစ်ပြိုင်တည်း အသုံးပြုနိုင်ခြင်း (အသုံးပြုသောဝန်ဆောင်မှုပေါ်မူတည်၍)
Web, Facebook, YouTube, Music
Telenor Broadband 10Mbps
တပ်ဆင်ခ :၁၅၀,၀၀၀ ကျပ် (လုံးချင်းအိမ်များအတွက်)တိုက်ခန်းများ တပ်ဆင်ခ မကောက်ခံပါ။
အသုံးပြုသူ ၅ဦး မှ ၆ဦးအထိ တစ်ပြိုင်တည်း အသုံးပြုနိုင်ခြင်း (အသုံးပြုသောဝန်ဆောင်မှုပေါ်မူတည်၍)
web,Facebook,Youtube,Music, Gaming နှင့် အရည်အသွေးမြင့်ဗီဒီယိုများကြည့်ရှုနိုင်
Telenor Broadband 15Mbps
အသုံးပြုသူ ၇ဦး မှ ၈ဦးအထိ တစ်ပြိုင်တည်း အသုံးပြုနိုင်ခြင်း (အသုံးပြုသောဝန်ဆောင်မှုပေါ်မူတည်၍)
web,Facebook,Youtube,Music, Gaming နှင့် download အများအပြားပြုလုပ်နိုင်
တယ်လီနော Broadband Call Center: ၀၉၇၉၇၉၉၈၈၈၈
Telenor Broadband Rules and Regulations
Information will be derived from CAF Rules and Regulation in the Word file
Telenor Broadband အင်တာနက် ၀န်ဆောင်မှု၏ စည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်များ
Broadband အသုံးပြုသူ user များအတွက် broadband bill ပေးဆောင်ရန် အဆင့် ၂ ဆင့်ရှိပါသည်။
​​ Telenor Broadband မှ ဘယ်လို ဝန်ဆောင်မှုမျိုးပေးပါလဲ။
Telenor Broadband မှ ဈေးနှုန်းချိုသာ၍ စိတ်ချရသော အင်တာဝန်ဆောင်မှုကိုပေးပါတယ်။
Telenor မီးပျက်နေတဲ့အချိန် ဝန်ဆောင်မှုကို ရရှိနိုင်ပါလား။
တယ်လီနော Broadband ကိုယ်ပိုင် power backup ရှိပြီး မီးပျက်နေချိန်အတွင်း ဝန်ဆောင်မှုကို ၈နာရီကြာ အသုံးပြုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ (wifi လွှင့်ပေးနိုင်တဲ့ router အတွက် မီးရရှိရန်မှာတော့ သုံးစွဲသူရဲ့ တာဝန်သာဖြစ်ပါတယ်။)
ခေတ်မီတဲ့ Telenor Broadband ဟာ ဘယ်လို အဆင့်မြင့်မားတဲ့ ဝန်ဆောင်မှုမျိုးကို အာမခံပါလဲ။
​​​​မြန်နှုန်း တစ်ဂစ်ဂါဘိုက်ထိ အာမခံနိုင်တဲ့ fiber connectionကိုတပ်ဆင်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။
ဂိမ်းကစားခြင်း၊ TV/ရုပ်ရှင်ကြည့်ချင်းများအတွက် အထူးသင့်လျော်တဲ့ အရည်အသွေးဖြစ်ပါတယ်။
​​အ​ခ​မဲ့​စမ်း​သပ်​အ​သုံး​ပြု​ခွင့်​ကို လက်ရှိအသုံးပြုနေတဲ့ wifi နဲ့ တယ်လီနောရဲ့ fiber broadband ဘယ်လိုကွာခြားလဲ။
​အရမ်းကွာပါတယ်။ တယ်လီနော broadband ဟာ သင့်တစ်ယောက်ထဲအတွက် မြန်နှုန်းတစ်ခု သတ်မှတ်ပေးထားမှာဖြစ်ပါတယ်။ အင်တာနက် cable ကို သင့်ရဲ့ outlet ဒါမှမဟုတ် router မှာ ချိတ်ထားပြီး အကောင်းဆုံးမြန်နှုန်းကို ရယူနိုင်ပါတယ်။ သင့်ကိုယ်ပိုင် wifi မှာလဲ အသုံးပြုသူဘယ်နှစ်ယောက်ဆိုတာကို သင်ကိုယ်တိုင် သတ်မှတ်နိုင်ပါတယ်။ အကွာအဝေးနဲ့ နံရံကဲ့သို့ အတားအဆီးများဟာ မြန်နှုန်းအပေါ် ထိခိုက်နိုင်တဲ့အတွက် Router ကိုသင့်အနီးနားတွင် ထားသင့်ပါတယ်။
Telenor Telenor Broadband တွင် plans ဘယ်နှစ်ခု ရှိပါလဲ။
Telenor Broadband တွင် 5Mbps, 10Mbps နှင့် 15Mbps တို့ရရှိနိုင်ပါတယ်။
​ ကွန်ရက်တည်ငြိမ်မှုက ဘယ်လိုလဲ။5Mbps, 10 Mbps နဲ့ 15 Mbps တို့အတွက် အသုံးပြုသူ ဘယ်လောက်ထိ များနိုင်မှာလဲ။
ကွန်ရက်မှာ အလွန်တည်ငြိမ်ပြီး router သို့ဝင်ရောက်သော မြန်နှုန်းမှာ အမြဲတူညီနေမည်ဖြစ်သည်။ router သို့ အသုံးပြုသူများများချိတ်ဆက်နိုင်သော်လည်း များပြားသည်နှင့်အမျှ တစ်ယောက်ချင်းစီအပေါ်သက်ရောက်မှုရှိနိုင်သည်။
​ဒီအစီစဉ်က Unlimited လား။
ဟုတ်ပါတယ်။ နှစ်သက်သလောက် ဒေတာကို အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ သို့သော် တဆင့်ပြန်လည် ဝေမျှခြင်း ရောင်းချခြင်းတို့ကိုတော့ ပြုလုပ်လို့မရပါဘူး။
​ Telenor Broadband နဲ့ ဘယ်လောက် surf လုပ်နိုင်မလဲ။
“ကြိုက်သလောက် surf လုပ်နိုင်ပါတယ်။”
-Telenor Broadband နဲ့ဆိုရင် သင်ရွေးချယ်ထားတဲ့ မြန်နှုန်းအတိုင်း စိတ်ကြိုက် surf လုပ်နိုင်ပါတယ်။
-Wifi router ဖြင့် mobile surfing ပြုလုပ်နိုင်သလို ကြိုးဖြင့်ချိတ်ဆက်ပြီးလဲ computer သို့မဟုတ် အခြား device နဲ့ အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။
အသုံးပြုသူအများအပြားမှ တစ်ပြိုင်တည်း အသုံးပြုနိုင်မလား။
​ရပါတယ်။ တယ်လီနော Broadband ဝန်ဆောင်မှုများအတွက်ကွဲပြားခြားနားသောအမြန်နှုန်းနှင့်ကွဲပြားခြားနားသောဈေးနှုန်းများရှိပါတယ်။ ကွဲပြားခြားနားသောဈေးနှုန်းပေါ်မူတည်ပြီး ဝန်ဆောင်မှုကိုသုံးနိုင်သည့်လူများ၏အရေအတွက် အတွက် ကွဲပြားခြားနားသောစွမ်းရည်ကိုရပါလိမ့်မယ်။
5Mbpss, 10Mbps နှင့်15Mbps plans များ၏ ဈေးနှုန်းများ။
5Mbps plan အတွက် ၅၅,၀၀၀ကျပ် နှင့် 10Mbps plan အတွက် ၉၉,၀၀၀ကျပ် 15Mbpsအတွက် ၁၄၉,၀၀၀ ကျပ်ဖြစ်ပါတယ်။
​ ဈေးနှုန်းတွင် အခွန်ပါပြီးသားလား။
Telenor Broadband ဝန်ဆောင်မှုများအတွက် နှစ်စဉ်ကြေးပေးရန် မလိုပါ။
(router, cable) ကဲ့သို့ device များအတွက် ပေးရန်လိုပါသလား။
​Telenor Broadband ဝန်ဆောင်မှုအသုံးပြုသူများသည် router အတွက် ငွေပေးဆောင်ရန်မလိုပါ။ ဝန်ဆောင်မှုကို အသုံးမပြုတော့ချိန်တွင် တယ်လီနောမှ router ကို ပြန်လည်သိမ်းယူမှာဖြစ်ပါတယ်။
​ Wifi router ကို နေရာပြောင်းလိုလျှင် ထပ်မံပေးဆောင်ရန်လိုပါသလား။ နေရာပြောင်းရန် ဘယ်လောက်ကြာမှာပါလဲ။
Customer အသုံးပြုလိုသူနေရာတွင် wifi router တပ်ဆင်ခြင်းအား အခမဲ့တစ်ကြိမ်သာ ပြုလုပ်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ အကယ်၍ နေရာပြောင်းလိုလျှင် ကျသင့်ငွေထပ်မံပေးဆောင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ customer ထံမှ သတင်းအချက်အလက် ရယူပြီး ၇ရက်အတွင်း နေရာပြောင်းရွှေ့ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။
​ နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာ ကျွမ်းကျင်သူများမှ အင်တာနက်ချိတ်ဆက်ခြင်း ပြဿနာလာရောက် ဖြေရှင်းသောအခါ အခကြေးငွေပေးရန်လိုပါသလား။
​You may not need to pay if technical fault is happened at Telenor side/by Telenor. တယ်လီနောကြောင့်ဖြစ်ပွားသော နည်းပညာချို့ယွင်းမှုများအတွက် ပေးဆောင်ရန်မလိုပါ။ သုံးစွဲသူကြောင့်ဖြစ်ပွားသော (ဥပမာ cable/router ပျက်စီးခြင်း) တို့အတွက်ပေးဆောင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။
Telenor Broadband ဝန်ဆောင်မှုသည် Prepaid နှင့် Postpaid မည်သည့်အစီအစဉ်ဖြစ်ပါလဲ။
​လက်ရှိအချိန်တွင် Prepaid ဖြစ်ပါတယ်။
ဝန်ဆောင်ခပေးချေရမယ့်နေ့တွင် မပေးခြင်းအတွက် ရပ်ဆိုင်းခံရပါမယ်။ ရပ်ဆိုင်းခံရခြင်း ၃လဖြစ်သွားလျှင် ပိတ်ပင်ခြင်းခံရမှာဖြစ်ပါတယ်။
​ရပ်ဆိုင်းခြင်း ပိတ်သိမ်းခြင်း မခံရခင် အသုံးပြုနိုင်သော အနည်းဆုံးအချိန်က ဘယ်လောက်ပါလဲ ။
customer မှ subscribes ပြုလုပ်သရွေ့ အသုံးပြုနေနိုင်မှာဖြစ်ပြီး ငွေပေးချေမှုမပြုလုပ်တော့လျှင် ရပ်ဆိုင်းသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။
​Telenor Broadband customers များအတွက် ငွေပေးချေမှုနည်းလမ်းကဘာများလဲ။
Telenor Broadband customers များအတွက် လက်ရှိအချိန်မှာ WaveMoney တစ်ခုတည်းကို အသုံးပြုရမှာဖြစ်ပါတယ်။
ဘယ်အချိန်မှာ လာရောက်ဆင်ပေးမှာပါလဲ ။
Telenor Broadband ဝန်ဆောင်မှုကို subscription လုပ်ပြီး တစ်လအတွင်း လာရောက်တပ်ဆင်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ အကယ်၍ သင်နေထိုင်ရာ အဆောက်အဦးတွင် Telenor Broadband service ရှိနေပြီးဖြစ်ပါက ၁၄ရက်အတွင်း တပ်ဆင်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။
​ တိုက်ခန်းတစ်ခုတွင် install ပြုလုပ်ရန် ကြာချိန်ကို ပြောပေးပါ။
တိုက်ခန်းတွင် install ပြုလုပ်ရန် အချိန် တစ်နာရီမှ လေးနာရီလိုအပ်ပါတယ်။
Ownership ပြောင်းလဲရန် ဘယ်လိုဆောင်ရွက်သင့်ပါလဲ။
1. Telenor Broadband call center: 09797998888 သို့ဆက်သွယ်ပြီး အမည်ပြောင်းလဲလိုကြောင်းပြောပါ။
2. သင့် email လိပ်စာပေးပါ။
3. Telenor Broadband မှ CAF(Customer Acceptance Form) နှင့် Installation Agreement form တို့ကို emailမှတစ်ဆင့် ပေးပို့မှာဖြစ်ပါတယ်။
4. CAF form နှင့် Installation Agreement form တို့ကို သင်ပြောင်းလဲမှတ်ပုံတင်လိုသော နာမည်နှင့် ဖြည့်ပြီး Telenor Broadband သို့ ပြန်လည်ပေးပို့ရန်ဖြစ်ပါတယ်။
​အိမ်ပြောင်းသွားလျှင် broadband ကိုအခြားနေရာများတွင် ဆက်လက်အသုံးပြုနိုင်မလား။
Fixed service ဖြစ်ပြီး သင့်အိမ်၊ တိုက်ခန်းအတွက်သာ တပ်ဆင်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက် ပြောင်းရွှေ့ခြင်းမှာ မဖြစ်နိုင်ပါဘူး။ အကယ်၍ သင်ပြောင်းရွှေ့သောနေရာမှာ တယ်လီနောမှ fixed services များပေးသည့်နေရာဆိုလျှင် ထိုနေရာမှ subscribe ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်။
တယ်လီနောကွန်ရက် အချိန်ကြာမြင့်စွာ downနေလျှင် နစ်နာကြေး ပေးသွားမှာလား။
အကယ်၍ ကွန်ရက်အချိန်ကြာမြင့်စွာ (တစ်ပတ်ထက်ပို၍) down နေလျှင် customer များအတွက် နစ်နာကြေးရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။ စမ်းသပ်အသုံးပြုကာလအပြီး ဝန်ဆောင်မှုဝယ်ယူချိန်တွင် ရေးထိုးရမည့် စာချုပ်တွင် အသေးစိတ်ဖော်ပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။
​Telenor Broadband Call Center ရဲ့ အလုပ်ချိန်များကို ဖော်ပြပေးပါ။
Telenor Broadband Call Centerသည် နေ့စဉ် မနက် ၇နာရီမှ ည၈နာရီအထိ ခေါ်ဆိုဆက်သွယ်နိုင်ပါတယ်။